Ciidamo Taabacan dowladda KMG ee Soomaaliya oo saakay la wareegay gacan ku haynta degmada Luuq
Loading...	Home Wararka Ciidamo Taabacan dowladda KMG ee Soomaaliya oo saakay la wareegay gacan ku haynta degmada Luuq
Ciidamo Taabacan dowladda KMG ee Soomaaliya oo saakay la wareegay gacan ku haynta degmada Luuq	Wednesday, 19 August 2009 07:02	Ciidamo ka tirsan dowladda KMG ee Soomaaliya ayaa saakay waxaa ay la wareegeen gacan ku haynta degmada Luuq ee gobolka Gedo.
Gaashaanle sare Maxamed Cismaan Wali oo ah taliyaha hogaaminayay Ciidamada dowladda ee saakay la wareegay gacan ku haynta degmada Luuq islamarkaana la hadlayay Shabelle ayaa waxa uu sheegay in Ciidamo uu hogaaminayay oo kuwa dowladda KMG ah ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta degmada Luuq ee gobolka Gedo.
Waxa uu xusay in Ciidamadii Xisbul Islaam ee halkaasi joogay ay isaga baxeen kadib markii Ciidamo ka tirsan dowaladda KMG ee Soomaaliya ay dhowr jiho ka soo galeen sida uu hadalka u dhigay iyadoona aysan jirin wax dagaal ah oo halkaa ka dhacay.
Gaashaanle sare Maxamed Cismaan oo ah taliyahii dhawaan dowladda KMG ee Soomaaliya ay u magacowday gobolka Gedo ayaa waxa uu ka gaabsaday in uu faah faahin ka bixiyo in Ciidamada uu hor kacayo ay u sii gudbayaan deegaano kale.
Wararka haatan Magaalada Laga helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in Haatan Magaalado ay tahay Mid degan iyadoo wali si toos ah aan loo wada furin howlihii ganacsiga ee halkaasi ka jiray,waxaana ciidamadu ay fariisimo ka samayeteen meelo badan oo ka mid ah degmada Luuq.
Ilaa iyo hadda lama oga meel ay cirib iyo jaan dhigeen Maamulkii Xisbul Islaam ee ka ariminayay degmada Luug ee Gobolka Gado iyadoo sidoo kalana aanay jirin Masuul ka tirsan Xisbul Islaam oo ka hadlay qabsashada ciidamada dowladda ee degmadaasi Luuq.
Degmada Luuq waxaa ay noqonaysaa degmadii labaad ee hal isbuuc lagala wareego Xoogaga islaamiyiinta oo ka tirsan gobolka Gedo iyadoo maalmo ka hor degmada Balad Xaawo ee gobolkaasi ay la wareegeen Ciidamada Culumaa'udiinka Ahlu Sunna Waljamaaca.